Shiinaha Silikoon Foley Kateetar leh warshad baarista heerkulka iyo soosaarayaasha | Kangyuan
Xirxirida: 10 kumbiyuutarro / sanduuq, 200 kumbiyuutarro / kartoon
Cabbirka kartoonka: 52x34x25 cm
Waxaa loo isticmaalaa kaadiheynta kaadi-mareenka ee caadiga ah ee kaadi-mareenka ama dheecaanka kaadi mareenka si joogto ah loola socdo heerkulka kaadiheysta bukaanka oo leh kormeeraha.
Badeecadani waxay ka kooban tahay tuubbada dheecaanka kaadi mareenka iyo baaritaanka heerkulka. Kateetarka dheecaanka kaadi mareenka wuxuu ka kooban yahay jirka kateetarka, buufin (kiish biyo ah), madaxa hagaha (caarada), isku xirka lumen, buuxinta isugeynta lumen, heerkulka cabbirka lumen, isku xirnaanta lumen (ama maya), furitaanka lumen (ama maya) iyo hawo waalka. Baaritaanka heerkulka wuxuu ka kooban yahay baaritaanka heerkulka (kuleylka kuleylka), isku xirnaanta fiilada iyo hagaha siligga hagaha. Kateetarka carruurta (8Fr, 10Fr) waxaa ku jiri kara silig hage ah (ikhtiyaari ah). Jirka kateetarka, madaxa hagaha (caarada), buufin (biyo kiish) iyo isqurxin kasta oo lumen ah waxaa laga sameeyaa silikoon; waalka hawadu wuxuu ka samaysan yahay polycarbonate, ABS plastic iyo polypropylene; furitaanka bullaacaddu wuxuu ka sameysan yahay PVC iyo polypropylene; siligga hagaha wuxuu ka samaysan yahay caag PET ah iyo baaritaanka heerkulka wuxuu ka samaysan yahay PVC, fiber iyo walxo bir ah.
Sheygan waxaa lagu qalabeeyaa heerkulbeeg dareema heerkulka asaasiga ah ee kaadi haysta. Qiyaasta cabirka waa 25 ℃ ilaa 45 ℃, saxnaantuna waa ± 0.2 ℃. 150 daqiiqo oo isku dheelitiran waa in la adeegsadaa cabirka ka hor. Awoodda, xoogga kala-xiraha isku xiraha, isku halaynta buufinta, foorarsiga iska caabinta iyo heerka socodka ee badeecadani waa inay buuxisaa shuruudaha ISO20696: 2018 standard; la kulan shuruudaha isugeynta elektromagnetic ee IEC60601-1-2: 2004; la kulan shuruudaha amniga korantada ee IEC60601-1: 2015. Badeecadani waa mid nadiif ah oo jeermis ku dishay ethylene oxide. Qadarka haraaga ah ee ethylene oxide waa inuu kayaryahay 10 μg / g.
Maqaallo / Sooc
Faahfaahinta Faransiiska (Fr / Ch)
Dhexdhexaad ahaanta dibadda ee tubbada tuubbada (mm)
lumen labaad, lumen saddexaad
buluug cirro leh
Lumen labaad, lumen saddexaad, lumen forth
1. Saliidaynta: kateetarka waa in lagu saliiyaa saliid caafimaad kahor galinta.
2. Gelinta: Kateetarka saliideysan geli kaadiheysta kaadiheysta si taxaddar leh (kaadida waa la siidayaa waqtigan), ka dibna geli 3-6cm oo buufinku gebi ahaanba geli kaadiheysta.
3. Biyo qulqulaya: Adiga oo isticmaalaya siliinge aan irbad lahayn, buufin buufin biyo nadiifa ah ama 10% glycerin aqueous solution ayaa la keenaa. Mugga lagu taliyay in la isticmaalo ayaa lagu calaamadeeyay masafka kateetarka.
4. Qiyaasta heerkulka: haddii loo baahdo, ku xir isku-xidhka dhammaadka dibedda ee baaritaanka heerkulka godka kormeeraha. Heerkulka bukaan socodka waa lala socon karaa waqtiga dhabta ah iyada oo loo marayo xogta ay soo bandhigtay kormeeraha.
5. Ka saar: Markaad ka saareyso kateetarka, marka hore kala sooc qadka xariiqa heerkulka iyo kormeeraha, geli saliinge faaruq ah oo aan irbad lahayn galka, iyo buufin biyo nadiif ah oo nuugaya. Marka mugga biyaha ku jira sirinjeerku u dhow yahay cirbadda, kateetarka si tartiib ah ayaa loo soo bixin karaa, ama jirka tuubbada waa la goyn karaa si looga saaro kateetarka ka dib dheecaan degdeg ah.
6. Degitaanka: Waqtiga sii degida wuxuu kuxiranyahay baahiyaha caafimaad iyo baahiyaha kalkaalinta caafimaad, laakiin waqtiga ugu badan ee degida waa inuusan ka badnaan 28 maalmood.
1. Cudurka kaadi mareenka ee daran.
2. Xanuun daran.
3. Fashilinta lakulanka jabka miskaha iyo kaadi mareenka.
4. Bukaannada ay u arkeen kuwa aan ku habboonayn rugaha caafimaad.
1. Marka aad saliidaynaysid kateetarka, ha isticmaalin saliid ay ku jirto maadada saliidda. Tusaale ahaan, isticmaalka saliida barafka sida saliid ahaan waxay sababi doontaa dillaac buufin.
2. Cabbirrada tuubbooyinka ee kala duwan waa in lagu xushaa da'da ka hor isticmaalka.
3. Kahor isticmaal, hubi in kateetarka uu shaqeynayo, in buufinku uu daadanayo iyo in kale, iyo in nuugiddu aysan ka hor istaagin. Ka dib markaad ku xirto qalabka baaritaanka heerkulka iyo kormeeraha, in xogta la soo bandhigay ay tahay mid aan caadi ahayn iyo in kale.
4. Fadlan hubi ka hor intaadan isticmaalin. Haddii badeecad keliya (la buuxiyo) lagu helo inay leedahay shuruudaha soo socda, waa mamnuuc in la isticmaalo:
A) dhaafsiisan waqtiga dhicitaanka ee nadiifinta;
B) xirmada kaliya ee alaabtu ay dhaawacan tahay ama ay leedahay arrimo dibadeed.
5. Shaqaalaha caafimaadku waa inay qaadaan talaabooyin dabacsan inta lagu guda jiro samaynta ama ku-shubashada, iyo inay si fiican u daryeelaan bukaanka wakhti kasta inta lagu jiro qashin-siinta haynta gudaha si looga hortago shilalka.
Ogeysiis gaar ah: marka tuubada kaadidu ay dhex jiifto 14 maalmood ka dib, si looga fogaado in tuubadu ay u siibato sababo la xiriira isbadal ku dhaca jirka ee biyaha nadiifka ah ee buufinka, shaqaalaha caafimaadku waxay ku duri karaan biyaha nadiifka ah balooniga hal mar. Qaabka qalliinka waa sida soo socota: tubbada kaadida ku haay xaalad sii jir ah, ku soo jiid biyaha nadiifka ah baloonida saliingaha, ka dibna ku dar biyo nadiif ah baloonida sida ku xusan awoodda magaca.
6. Gali siligga hagaha ah lumen-ka bullaacadaha ee kateetarka carruurta sidii isku-soocid kaabayaal ah. Fadlan soo bixi siligga hagaha markii lagugu shubo.
7. Badeecadan waxaa nadiifiyay macdanta "ethylene oxide" waxayna leedahay mudo ansax ah oo seddex sano ah laga bilaabo taariikhda wax soo saarka.
8. Badeecadani waa mid la isticmaali karo oo loo isticmaali karo kiliinikada, oo ay ku shaqeeyaan shaqaalaha caafimaadka, waana la baabi'in karaa marka la isticmaalo.
9. Xaqiijin la'aan, waa in laga fogaadaa in loo adeegsado nidaamka iskaanka nidaamka nukliyeerka magnetic nukliyeerka si looga hortago faragalin suuragal ah oo u horseedi karta waxqabadka cabbirka heerkulka aan sax ahayn.
10. Qulqulka qulqulka bukaanku waa in lagu cabiraa inta udhaxeysa dhulka iyo heerkulbeegga 110% qiimaha ugu sareeya ee shey bixinta shabakada.
1. Kormeeraha kumbuyuutarrada kala duwan ee la qaadan karo (qaabka mec-1000) ayaa lagula talinayaa badeecadan;
3. Badeecadani waxay ku habboon tahay nidaamka kormeerka heerkulka YSI400.
Tabaha Iswaafajinta Elektromagnetic
1.Badeecadan iyo qalabka kormeerka ee kuxiran waa inay qaadaan taxaddar gaar ah oo ku saabsan iswaafajinta electromagnetic (EMC) waana in lagu rakibo loona adeegsadaa si waafaqsan iswaafajinta elektromagnetic-ka ee ku qeexan tilmaamahan.
Shayga waa inuu adeegsadaa fiilooyinka soo socda si uu ula kulmo shuruudaha qiiqa elektromagnetic iyo ka hortagga faragelinta:
Qadka korantada （16A）
2. Isticmaalka aaladaha, dareemayaasha iyo fiilooyinka ka baxsan baaxadda la cayimay waxay kordhin karaan soo saarista elektromagnetic ee qalabka iyo / ama waxay yareyn kartaa xasilloonida elektromagnetic ee qalabka.
3. Badeecadan iyo qalabka kormeerka ee ku xiran looma isticmaali karo meel u dhow ama lagu dhejin karo aalado kale. Haddii loo baahdo, kormeer dhow iyo xaqiijin waa in la sameeyaa si loo hubiyo hawlgalkeeda caadiga ah qaabeynta loo adeegsaday.
4. Marka cabirka waxtarka cabirka uu ka hooseeyo cabirka ugu yar ee ku qeexan qeexitaanada farsamo, cabirku wuxuu noqon karaa mid khaldan
5. Xitaa haddii qalab kale u hoggaansamo shuruudaha bilaabista ee CISPR, waxay u horseedi kartaa faragelin qalabkan.
6. Qalabka isgaarsiinta ee la qaadan karo iyo kuwa mobilada ayaa saameyn ku yeelan doona waxqabadka qalabka.
7. Aaladaha kale ee ay kujirto faafitaanka RF waxay saameyn ku yeelan kartaa aaladda (tusaale, taleefanka gacanta, PDA, kumbuyuutar ay ku shaqeyso wireless).
Soo-saare: HAIYAN KANGYUAN CUDURADA CAAFIMAAD CO., LTD
Hore: Hawada Mareenka Laryngeal for Single Use
Xiga: 2 Way Silicone Foley Catheter oo leh Tiemann Talo
kateetarka leh baaritaanka heerkulka
kateetarka leh dareeraha heerkulka
tuubbada foleyda ee leh heerkulka baaritaanka
tuubbada foleylka leh dareeraha heerkulka
tuubbada silikoon ee leh heerkulka baaritaanka
Kateetarka silikoonka leh dareeraha heerkulka
silsilad foornada foley ah oo leh heerkulka baaritaanka
silsilad foornada lagu dhejiyo foornada leh dareeraha heerkulka
heerkulka siligga siligga siligga ah
Kateetarka dareeraya heerkulka
heerkulka dareeraha tuubada foley
heerkulka dareemaya silsilad siligga lagu shubo
Kateetarka kaadi mareenka ee heerkulka
heerkulka dareeraha foleyga foley
Kateetarka kaadi mareenka ee leh heerkulka baaritaanka
tuubada kaadi mareenka ee dareeraha heerkulka
Kateetarka kaadi mareenka oo leh dareeraha heerkulka
Silikoon Tracheostomy Tube
Silicone Urinary Foley Catheter oo leh Temperatur ...